IXesha le-19 leminyaka e-Ireland laphawulwa nguMhlahlandlela wePeriodic against the British Rule
Ezihlobene: Imifanekiso yeVintage yeIreland
I-Ireland kwiminyaka ye-1800 ikhunjulwa ngezinto ezimbini, indlala kunye nokuvukela.
Phakathi no-1840 iNdlala enkulu yachitha ilizwe, yabulala uluntu jikelele kwaye iphoqa amawaka angamawaka ama-Irish ukuba ashiye ilizwe lawo ukuze abe nobomi obungcono kulwandle.
Kwaye inkulungwane yonke yabhalwa ngokuchasene kakhulu nombuso waseBrithani owagqitywa kwiinkqubela zokunyuka kweenguqulelo kunye nokuvukela kwangaphambili. Ikhulu le-19 leminyaka laqala nge-Ireland ekuvukeleni, kwaye yaphela ngokuzimela kwe-Ireland ngokukhawuleza.
Inkxwaleko yezopolitiko e-Ireland ezaza kubonisa ukuba ngenkulungwane ye-19 yaqala ngo-1790, xa intlangano yokuguquguquka, iUnited Irishmen, yaqala ukulungelelanisa. Iinkokeli zentlangano, ngokugqithiseleyo uTheobald Wolfe Tone, wadibana noNapoleon Bonaparte kwiFransi yenguqu, efuna uncedo ekutshatyalaleni ukubusa kweBrithani e-Ireland.
Ngo-1798 izivukelo ezixhobileyo zagqitywa kwiIreland, kwaye imikhosi yaseFransi yabuya yaza yaxabana ne-British Army ngaphambi kokutshatyalaliswa nokuzinikela.
Ukuvuswa kuka-1798 kwahlulwa ngokugqithisileyo, kunye namakhulu ama-Irish patriots azingela, ahlushwa, aze abulawe. UTheobald Wolfe Tone wathinjwa waza wagwetyelwa ukufa, waba ngumfel 'ukholo kubantu baseIreland.
Uvukelo lukaRobert Emmet
Ipapasho sikaRobert Emmet ngokubhiyozela ukufa kwakhe. Imbeko edibeneyo yeNew York Library Collections
I-Dubliner uRobert Emmet yavela njengenkokeli yesigqeke esincinane emva kokuvuswa kuka-1798. U-Emmet waya eFransi ngo-1800, efuna uncedo lwangaphandle kwiiplani zakhe zokuguqula, kodwa wabuyela e-Ireland ngo-1802. Walungiselela imvukelo eya kugxininisa ekuthatheni amaphulo aqhinga kwisixeko saseDublin, kuquka i-Dublin Castle, inqaba yaseBrithani.
Uvukelo lukaEmmet lwaqala ngoJulayi 23, 1803 xa abaphambukeli abangamakhulu ambalwa bathatha izitratato zaseDublin ngaphambi kokuba bahlakazeke. U-Emmet yena wabaleka kuloo mzi, waza wathinjwa inyanga emva koko.
Emva kokunikezela inkulumo ecatshulwa kunye nexesha elicatshulweyo ekulingweni kwakhe, uEmmet waxhonywa kwisitalato saseDublin ngoSeptemba 20, 1803. Ukubulawa kwakhe kwakuza kubakhuthaza izizukulwana zezahlubuki zaseIreland.
Ubudala bukaDaniel O'Connell
Ininzi yamaKatolika e-Ireland yayivinjelwe yimithetho eyadluliselwa ngasekupheleni kwe-1700s ekubeni ibambe inani lekarhulumente. Umbutho wamaKatolika wakhiwa ekuqaleni kwee-1820s ukufumana ukhuseleko, ngokungabikho koogonyamelo, utshintsho oluya kuphelisa ukunyanzeliswa okukhulu kwabantu base-Ireland base-Ireland.
UDaniel O'Connell , ugqwetha waseDublin kunye nezopolitiko, wanyulwa kwiPalamente yaseBritani kwaye wavutha ngempumelelo ngenxa yamalungelo oluntu kubantu abaninzi base-Ireland.
Umkhokeli onobuchule kunye no-charismatic, u-O'Connell waziwa ngokuba ngu-"Liberator" ukufumana oko kwaziwa ngokuba yi-Catholic Emancipation e-Ireland. Wayelawula amaxesha akhe, kwaye kwiminyaka eyi-1800 ezininzi iintsapho zase-Ireland zaziza kuprintwa ngo-O'Connell ezixhomekeke kwindawo ekhethiweyo. Kaninzi "
I-Young Ireland Movement
Iqela leengcamango zaseIreland zengqondo zakha inzululwazi yase-Young Ireland ekuqaleni kwee-1840. Umbutho wawujolise kumaphephancwadi weSizwe, kwaye amalungu ayefuna ukufundiswa kwiikholeji. Intlangano yezopolitiko yaphuma kwimoya yengqondo kwi-Trinity College yaseDublin.
Amalungu ase-Young Ireland ngamanye amaxesha ayegxeka kakhulu iindlela zikaDaniel O'Connell zokusebenzisana neBritani. Ngokungafani no-O'Connell, ngubani onokuthabatha amawaka "kwiintlanganiso" ze-monster, inhlangano yaseDublin ayinalo inkxaso e-Ireland. Kwaye ukuhlukana okwehlukeneyo ngaphakathi kwintlangano kwakunciphisa ekubeni ngumsebenzi onamandla wokutshintsha.
Amalungu ombutho we-Young Ireland aqala ukuqwalasela imvukelo yeempahla emva kokuba enye yeenkokeli zayo, uJohn Mitchel, wafunyanwa enecala ngo-Meyi 1848.
Njengoko kwakuza kwenzeka ngeentshukumo ezininzi ze-Irish, iifayili zikhawuleze zikhuphe izikhulu zaseBrithani, kwaye ukuvukela okucwangcisiweyo kwakuza kuphelelwa. Imizamo yokuba abalimi baseIreland bahlangane kwiqela elixhobileyo lokuziphendulela, bavukela, kwaye imvukelo yahla into ethile. Emva kwe-standoff kwindlu yokufama yaseTipperary, iinkokeli zeemvukelo zakhawuleza zijikeleze.
Ezinye iinkokeli zabalekela eMelika, kodwa abaninzi babetyala ngokugwenxa kwaye bagwetywa ukuthutha kwiikoloni zentlango eTasmania (apho abanye babeya kubaleka eMelika).
Abaxhamli baseIrish baxhaswa kwiNkxaso yaseKhaya
I-Brigade yase-Ireland isuka kwisixeko saseNew York, ngo-Apreli 1861. Imbeko yeNew York Public Library Collections
Ixesha elilandelayo emva kokuvusa i-1848 ukuvukela kwaphawulwa ngokunyuka kwe-Irish nationalist ngaphandle kwe-Ireland ngokwayo. Abaninzi abafudukela eAmerika ngexesha leNkathazo enkulu bahlala benomdla wokulwa noBrithani. Inani leenkokheli zase-Ireland ezivela kuma-1840 zazimisela ngokwazo e-United States, kwaye imibutho enjenge-Fenian Brotherhood yenziwa nge-Irish-American inkxaso.
Omnye umkhosi we-1848 Rebellion, uThomas Francis Meagher wathola impembelelo njengegosa eNew York, waba ngumlawuli we- Irish Brigade ngexesha leMfazwe yaseMelika. Ukuqashwa kwabafuduki baseIreland kwakusoloko kusekelwe kwingcamango yokuba amava empi angasetyenziswa ekuhambeni naseBrithani e-Ireland.
Ukulandela iMfazwe Yesizwe saseMelika, ixesha livulekele enye imvukelo e-Ireland. Ngowe-1866 amaFenians enza iinzame ezininzi zokuphanga ubuso baseBrithani, kubandakanywa ukuhlaselwa kakubi ngabantu base-Ireland baseMelika baseCanada. Imvukelo yase-Ireland ekuqaleni kuka-1867 yachithwa, kwaye kwakhona kwakhona iinkokheli zadibana zaza zagwetywa.
Abanye abavukeli base-Ireland babulawa yiBrithani, kwaye ukufelwa kwabafel 'ukholo kwaba negalelo elikhulu kwilizwe laseIreland. Kuye kwathiwa ukuba ukuvukela kwe-Fenian kwaphumelela kakhulu ukuhluleka.
UMphathiswa waseBrithani, uWilliam Ewart Gladstone, waqala ukwenza izivumelwano kwiIreland, kwaye ngasekuqaleni kwe-1870 kwakukho inkululeko e-Ireland ekhuthaza "uMgaqo weKhaya."
Isiganeko sokuxoshwa kwe-Irish ukususela ekupheleni kwe-1800s. Inzululwazi yeThala leNkcazo
Imfazwe yeMhlaba yayingekho imfazwe eninzi njengenkqubela eqhubekayo eyayiqala ngo-1879. Amafama aseMprayini awakhankanya into ababeyicinga ngayo izenzo ezingenabulungisa kunye nezidlozi zabasebenzi baseBrithani. Ngaloo xesha, abaninzi abantu base-Ireland babengenalo umhlaba, kwaye ke banyanzelekile ukuba baqeshise umhlaba abawufakela kumnini-mhlaba owawutshintshelwa ngamaNgesi, okanye abanikazi ababengabikho eNgilani.
Kwimeko eqhelekileyo yeMfazwe yoMhlaba, abaqeshi abaqulunqwe yi-Land League banqabela ukuhlawula iindleko kubanikazi bezindlu, kwaye imibhikisho iya kuphelisa ekukhutshweni. Kwisinyathelo esithile, i-Irish yangingqi yenqabile ukujongana nommeli womnini-ogama lakhe lokugqibela elingu Boycott, kwaye igama elitsha laziswa ngoko kulwimi.
Umholi wezopolitiko obalaseleyo kakhulu wase-Ireland wama-1800 emva koDaniel O'Connell nguCharles Stewart Parnell, owathi wavuka waba ngu-1870. UParnell ukhethwa kwiPalamente yaseBrithani, kwaye wenza izinto ezazibizwa ngokuba yizopolitiki zokukhupha, apho wayeza kuzivala ngokufanelekileyo inkqubo yowiso-mthetho xa ezama ukufumana amalungelo angakumbi kwi-Irish.
UParnell wayeyiqhawe kubantu abaqhelekileyo e-Ireland, kwaye wayebizwa ngokuba yi "King of Uncrowned King". Ukubandakanyeka kwakhe kwimeko yokuqhawula umtshato kuwonakalise umsebenzi wakhe wezopolitiko, kodwa izenzo zakhe egameni le-Irish "Home Rule" libeke isigaba sezopolitiko zangaphambili.
Njengoko inkulungwane iphela, ukuguquguquka kwenkululeko e-Ireland kwakuphezulu, kwaye isigaba sasibekelwe ukuzimela kwesizwe. Kaninzi "
Imfazwe Yesizwe YesiNgesi: iMfazwe yaseNaseby
Ukulinganisa iRoxox Reaction Example Inkinga
Iimpawu zeJapane ezisebenzayo zokuzi
Ngaba i-Corvette yakho i-Investment Good?